Dowladda Norwey oo xaafiis rasmi ah ku furaneysa Soomaaliya | KEYDMEDIA ONLINE
Dowladda Norwey oo xaafiis rasmi ah ku furaneysa Soomaaliya
Dowladda Norwey ayaa ku dhawaaqday in xafiis diblomaasiyadeed oo joogta ah ay ka furaneyso Soomaaliya kadib burburkii Dowladdi dhexe.
MUQDISHO, Soomaaliya – Kulan dhexmaray Wasiiru dowlaha Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga, ee Dowladda Fadaraalka, Balal Maxamed Cusmaan iyo Safiirka Norway, Elin Bergithe Rognlie, ayaa looga hadlay xoojinta xiriirka labo geesoodka iyo iskaashiga labada dal.
Sida lagu sheegay war ka soo baxay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya Marwo. Elin Bergithe Rognlie, ayaa Wasiiru dowlaha Arrimaha Dibadda u xaqiijisay in dalkeedu go’aansaday inuu ka mid noqdo dalalka xaafiisyada Diblumaasiyadeed ee rasmiga ah ku leh Soomaaliya.
“Safiiradda Norway ayaa ku dhawaaqday in ay bilowday qaban-qaabada dib loogu furayo xafiis diblomaasiyadeed oo joogta ah oo ay ku yeeshaan Muqdisho si loo fududeeyo howsha rasmiga ah iyo midda adeegga ah”. Ayaa lagu yiri warka ka soo baxay Dowladda.
Dhanka kale, qoraalka waxaa lagu sheegay in Agaasinka Socdaalka Norway uu aqoonsaday baasaboorka Soomaaliya, taas oo faa’iido u leh jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalkaas.
Dowladda Norway ayaa ka mid ah waddamada aan Xaafiisyo rasmi ah uga furneyn dalka, isla-markaana danjirayaashoodu ku sheeqaan Teendhada Xerada Xalane iyo Caasimadda Kenya ee Nayroobi.
Norway ayaa kamid ah Dalalka Soomaaliya ka caawiya dhinaca Mushaarka, iyo kaabidda miisaaniyadda, waxaana loo tixgaliyaa in ay tahay Dolwaddii, qoraalkii ugu kululaa kula hadashay Farmaajo, kadib markii uu muddo labo sano ah ku darsaday waqti xileedkiisa, markaas oo ay ku amaraty inuu kursiga si deg deg ah kaga dego.